गौरी जोशी र सुनिल साहबिचका सहमतिका साझा उम्मेद्वार, टेक्सास च्याप्टरका सभापतिका लागि सोफिन थापा – खुल्लामन्च : समुदायको आवाज
गौरी जोशी र सुनिल साहबिचका सहमतिका साझा उम्मेद्वार, टेक्सास च्याप्टरका सभापतिका लागि सोफिन थापा
प्रकाशित: २०७७ फागुन १४ गते ६:१७
टेक्सास – एनआरएनए अमेरिकाको मात्रै चर्चा छ, अहिले । कोरोना कहर : गोली मार्दिजे, एनआरएनए रहर धुंवा फाड्दिजे ! सबै रफ्तार त तालबाजी एकातिर रहेर पनि नेपाली अमेरिकी समुदायको फेसबुके भित्तो एनआरएनए अमेरिकाको आसन्न निर्वाचनको रौनकताले रंगिएको छ । फोटो कसैले टांस्यो कि बधाई, शुभकामना र शुभेक्षामनाक्को पुकाराले कमेण्ट र लाईकका तांती लागेका अवस्था छ ।
करिब २१ हजार सदस्य बनाएको सुनिल साहको एनआरएनए अमेरिकाको वर्तमान कार्यसमितिको सबैभन्दा ठुलो जग भनेकै ग्रास रुट हो, वा भनौं च्याप्टर हो । त्यसो त, सबैभन्दा ठुलो सामुदायिक गजुर राखेको अमेरिकी टेक्सास समाज यसपाली सबैभन्दा धेरै सदस्य हुने दोस्रो ठुलो राज्य बनेको छ । एनआरएनएका हस्तीहरु गौरीराज जोशी, हरिबोल भन्डारी, सुनील साह, सिपी पौडेल र असन्न निर्वाचनका लागि अध्यक्ष पदका बहुचर्चित प्रत्यासीहरु कृष्ण लामिछाने र डा. अर्जुन बन्जाडेहरुको कर्मथलो टेक्सासको आगामी एनआरएनए सभापती को बन्ने भन्ने बिषय पनि सर्वत्र चासो छ ।
विश्वस्त शुत्रकानुसार टेक्सास च्याप्टरको सभापतीको लागी सोफिन थापाको नाममा एनआरएनए आईसिसी सचिव गौरीराज जोशी र अमेरिका सभापति सुनील साहबिच सोफिन थापाको नाममा सहमती भएको छ । यसको मतलब, टेक्सास च्याप्टरको सभापतीको लागि सोफिन थापा गौरीराज जोशीको समुहबाट अघि सरेका छन । त्यसो त, चर्चित राज्यहरु डालस, क्यालिफोर्निया, कोलोराडो, न्यूयोर्क र बाल्टिमोरको लागि पनि जोशी र साहबिछ सहमती भएको शुत्र बताउंछ । जुन कुरा भबिश्यले बताउला ।
नेपालमा पनि सामाजिक कार्यमा कृयाशिल एनआरएनए टेक्सास च्याप्टरका लागि सभापतीका उम्मेद्वार सोफिन थापा एक सफल ब्यवसायी, पत्रकार तथा सामाजिक अभियान्ता हुन ।